Ibsa-#ABO: Gaaffiin Mirgaa Oromoo Oromoo Aangoomsuun Furama – OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATA.ORG
Akeekaa fi fedhii mootummaa cunqursaa guutuuf jecha mirga ummatootaa kabajuu hanqachuun Itophiyaa nagaa fi sabatinsa dhorkatee jeequmsaa fi hokkora keessatti babal’ise. Ol aantummaan murna bicuu humnaan gadi dhaabame ummatoota wayyaba mirga dhablummaan gidirse. Hiyyummaa fi beela dagaagsee jireenya gadadoo fi gadaantiif sababa tahe. Kana irraa har’a ummatootni harqootni cunqursaa humnaan irratti fe’ame mootummaa madda rakkinootaa kana irratti finciluun diddaa farra cunqursaa fi saaminsaa bal’inaan agarsiisaa jiran.
Ummata cunqursaa of irraa gatuuf tokkoomee ka’e, biyyaa fi qabeenya isaa irratti ajajaa tahuuf murteeffatee qabsootti seene, hiree isaa irratti murteessaan isa qofa tahuu hubatuun mirga humnaan dhabe deebifatuuf wareegama fedhe fudhatuuf dhaaba isaa hogganu jalatti hiriiree qophaa’e humni dhaabuu danda’u akka hin jirre galmeen seenaa ummatoota cunqurfamoo haalaan hubachiisa. Ummatni Oromoo mootummaa Wayyaanee/TPLF of irraa jigsuuf dhaaba isaa ABOn hogganamee qabsoo wal irraa hin citne gaggeessaa har’a gahuun eenyuyyuu jalaa dhokataa miti. Haa tahu malee mirgi ummata Oromoo kabajamuun dantaa Oromiyaa irraa argatu kan irraa kutu tahuu kan hubate Wayyaanee/TPLF diddaa ummata Oromoo kana humnaan ukkaamsuun sirna saaminsaa fi cunqursaa humnaan diriirsate jiraachisuuf murteeffate kaasuu diduu dhaan ummata Oromoo saamuu, ajjeesuu, hidhuu fi milishoota naannoo biraa itti duulchisuu fi dararuu akka itti fufetti jira.
Har’a ummatootni Itophiyaa addatti ummatni Oromoo labsii hatattamaa mootummaa shorarkeessaan labsameen bulchiinsa waraanaa jalatti argaman. Labsii hatattamaa kanaan qabsoo ummatootaa nan dhaamsa jedhee herregus kan itti hin milkoofnee tahuu diddaa ummatni Oromoo fi ummatootni biroo agarsiisaniin addatti ammo murannoo miseensota ABOQeerroo mirknaa’ee jira. Labsii hatattamaa labsateen kan diddaa ummatootaa dhaamsuu dadhabe mootummaan Wayyaanee ijibbaataaf tarkaanfii farrummaa gara garaa fudhataa jiraachuun ifatti mul’ata.
Diddaa Fincila Gabrummaa gara Fincila xumura Gabrummaatti ol guddatee itti fufiinsaan waggaa lamaa oliif Oromiyaa keessatti adeemsifame aangoo mootummaa murna bicuu gaaffii jala galchee muddamsuu seensisuun dhugaa mul’ataa addunyaan hundi arge dha. Mootummaan fincila ummatootaan baarage kun ummatootni maaliif ana irratti fincilan? Gaaffiin isaanii maali? jedhee furmaata itti barbaaduu irra rakkoo jiru caalaatti hammeessuun bittaa isaa itti fufsiisuu akka tooftaatti raggaafatee itti jira.
Akka kanaan ummata Oromoo diddaa isaatiin aangoo isaa gaaffii jala galchee fi humna tahuu isaa agarsiisee rakkoo hin jirree fi salphaatti furamuu danda’u uumuun olloota isaa irratti kakaasee akka isa lolan taasisuun humna isaa fi dandeettii jarmyaa Qabsoon argate laaffisuu fi rakkoo kanaan akka qabamu taasisuu akka tooftaatti raggaafatee itti fayyadamuu irratti argama. Akka kanaanis milishoota ummatoota ollaa Oromoo qubatan ofii leenjisee fi ajaje Oromoo lolchiise. Karoorri farrummaa kun hanga mootummaan farra ummatootaa kun aangoo irra jirutti kan itti fufu tahuun hin shakkisiisu.
Dandeettiin Jarmyaa Oromoo keessaa fi alatti jabaataa fi ititaa dhufuun yaadoo mootummaa Wayyaanee isa biraa ti. Tokkummaa fi Oromummaa jarmyaa irratti hundaawee jabaataa dhufe kana hanga hin dhabamsiifne ykn hin dadhabsiifnetti jireenyi isaa shakkisiisaa tahuu hubatuu irraa mootummaan farra ummata Oromoo kun tokkummaa Oromoo fi eenyummaa Oromoo irratti duuluu karooraan qabatee sosso’aa jira. Oromoo Oromoo irratti kakaasuu, dhara, sossobbii, gowwoomsaa fi humnaan ragaa walirratti taasisuun jibbiinsaa babal’isuun tokkummaa Oromoo diiguuf keessaa fi alatti bal’inaan hojjatuu irratti argama. Tooftaan har’a bulinnaaf hordofamu kunis hanga mootummaan faashistii aangoo irraa hin buufamnetti kan itti fufu taha.
Bittootni kan guutuu hin dandeenye akka guutanitti lallabuun ummata abdiin jiraachisuun amala isaanii ittiin bakamani dha. Ummata abdii kijibaa abdatuun akka jiraatu taasisuun dorgomaa kan hin qabne mootummaan Wayyaanee/TPLF diddaa ummata Oromoo caasaa jarmyaan qindaawe qabaneessuuf waadaa kijibaa dhuma hin qabne tarrisuun ummata Oromoo sossobachuuf yaalaa akka turee fi jiru dhokataa miti. Haa tahu malee tooftaan kun itti dammaqamuu irraa akka yaadametti ummata Oromoo bittaa Wayyaanee ameen jedhee akka fudhatuu taasisuu hin dandeenye. Tooftaan gowwoomsaa bittootaa kunis hanga Wayyaaneen aangoo irraa hin buufamnetti hin dhaabbatu.
Kanneeniin alatti tooftaaleen diinni itti fayyadamu hedduu tahuun dagatamuu hin qabu.
Ummatni Oromoo sabummaa isaatiin kabajamee jiraatuuf qabsoo bilisummaa gaggeesseen, Fincila gabrummaatti xumura gochuuf Oromiyaa mara keessatti finiinseen qabsoo bilisummaa fuula duratti furgaaseera. Injifannoon siyaasaa fi jarmyaa diina irratti gonfatame ol aanaa tahullee tarkaanfii humnaa fudhatamaa jiruun har’as taanaan qe’ee isaatti nagaa argataa hin jiru. Seeraan alatti hidhamuu fi ajjeefamuun, qabeenyi isaa saamamuu fi barbadeeffamuun irraa hin dhaabbatne. Lafa isaa irraa buqqaafamuu fi biyyaa baqachiifamuun akka itti fufetti jira. Roorroon daangaan alaa irra gahaa jiru kun dhaabbatuu qaba. Kana kan dhaabu ammoo daandiin tokkichii fi filmaata biraa hin qabne qabsoo bilisummaa itti jiramu galmaan gahuuf warraaquu dha. Waan taheef ABOn Oromiyaa keessatti saamichaa fi dararaa daangaa hin qabne ummata Oromoo irratti fudhatamaa jiruu fi shira raawwatamaa jiru kana qabsoo itti jiramuun xumura itti gochuuf waamicha hatattamaa kana dabarsa.
WBO fi Miseensota ABOf:
Miseensotni ABO irbuu ummata isaaniif seenan kabajuu dhaan lubbuu isaanii bakka bu’aa hin qabne osoo hin mararfatiin kennaniin qabsoo bilisummaa sadarkaa har’aan gahanii jiran. Qab-soo sadarkaa kana gahee jiru gudunfuuf har’as gaafatamni ol aanaa miseensota ABO irra jira. Waan taheef miseensotni ABO Oromiyaa fi biyyoota alaa gara garaa keessa jiraatan hundi mu-rannoo fi cichoomina kanaan duraa daran cimsatuun karaa danda’ame hunda qabsoo bili-summaa finiinsuu keessatti qooda keessan dachaan guddisuun akka sosso’tan ABOn dhaama.
Kaa’imman Oromoo qabsoo bilisummaa adeemsifamu keessatti diina dura dhaabbatuun seenaa boonsaa raawwataniin ummata isaaniitti kabajaa horaniiru. Hegeree isaaniif hiree isaanii harka galfatuuf daandii dheeraa deemanii jiru. Dardarri Oromoo kan ittiin boonamuu fi kanneen biroofis fakkii tahuu irraa gootummaan faarfama. Wareegamni Qeerroo fi Qarreen baafame caa-laatti milkaa’ee firee akka godhatuuf amna gabaabaa nu hafe irratti cichanii qabsaa’uun kan bo-riif hin bulfamne dirqama Oromummaa hunda keenya irra jiru dha. Waan ta’eef Qeerroon Oro-moo ummata Oromoo dukkana gabrummaa jalaa baasuuf guca tahuun bobaatee murannoo fi gootummaa kee mirkaneessite akeeka kaateef bakkaan gahuuf akkuma kanaan duraa tokkum-maan ka’i. Jaallanii fi waahellan kee sihi waliin hiriiruun gumaacha lubbuu baasuun qabsoo Oromoo addunyaatti beeksisan yaadadhuu, kaayyoo isaanii kan bakkaan geessu tahuu agarsiisi.
Ummata Oromoo bal’aaf:
Gootumma kee sihi qofa osoo hin taane alagaa dhihoo fi halaalaatu siif beeka. Kan himamuun alatti, akkasumas, kan fagoo dhiifnee isa dhihoo kaasuun qofti gootmmaa keetiif ragaa taha. Ak-ka ummata walabummaa barbaadu kamuu baroota dheeraaf QBO keessatti hirmaatuun wareega-ma hedduu baaftee jirta. Wareegamni waggoota lameen as aanan keessa baafte ammoo yoo-miyyuu yaadatamaa jiraata. Wareegama qaalii baafte kana addunyaatu raajeffate. Fira qabsoo hundatu itti gammade. Gootummaa kee kanneen waakkatuu kajeelan hunda rifaasiftee mataa gadi qabachiifte. Qoodaminsa diinni uumuuf yaale cabsitee Bahaa Dhihatti, Kaabaa Kibbatti tokkoomtee ka’uun kee diina qarqara qabriin gahee jira. Kan si hafate diina hin jirree jiraa fak-kaatu kana qabriin gahuu dha. Waan taheef QBO wareegama lammii Oromoo hundaan xumu-ratti dhihaate kana xumuruuf har’as akkuma kanaan duraa tokkummaan diina irratti ka’i. Akku-ma kanaan duraa finciluun diina watwaachisi. Humna tahuu kee dabalii itti agarsiisi.
Lammiilee Oromoo caasaa diinaan haammatamtanii jirtaniif:
Mootummaan Wayyaanee ummatoota Itophiyaa maraan jibbamee fi tuffatamee qabriitti arreed-aa akka jiru isin kanneen itti dhihoo jirtan jalaa dhokataa miti. Dabalata hagamuu waliin ho-jjatan mootummaan Wayyaanee kabajaa ilma namummaaf bakka kan hin qabnee fi safuu kan hin beekne tahuu isin caalaatti kan beekuu hin jiru. Aangaawotni wayyaanee lubbamuu irraa dantaa adda addaan isin firoomfachuun kufaatii irraa of baraaruuf wixxifataa akka jiranis isin jalaa hin dhokatu. Alagaan har’a isin sossobatuu isinii fi ummata keessan irratti maal akka raawwataa turee fi jiru ni dagattu jedhamee hin yaadamu. Dantaa yeroof jecha farra ummataa waliin hiriiruun ammaan booda dhaabbatuu qabaan murtii keessan tahuu ummataaf caalaatti mirkaneessuu qabdan. Ummata boris jiraatu mootummaa bor hin jirreen jijjiiruun wal tajjab-siisa. Waan taheef alagaaf meeshaa, ummata ofii irratti ammoo farra tahuu lagatuun garee um-mataa tahuu keessan dalagaan agarsiisaa. Kan injifatu ummata waan taheef maqaa dabruun seenaa boonsaa hin dabarre raawwadhaa.
Waxabajjii 7, 2017
Ergamtichi Wayyaanee Lammaan magarsaa maqaa misoomaatiin uummata magaalaa Naqamtee goolaa akka jiru Qeerron gabaase.